Cummins ဒီဇယ်ထွန်းလင်းစက်များ၏အင်္ဂါရပ်များ - MECCA Power
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / cummins ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ၏အင်္ဂါရပ်များ
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-02 မူလ:ဆိုက်ကို
cummins ဒီဇယ်မီးစက်အစုံအင်ဂျင်, မီးစက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါဝင်သည်။ Cummins Diesel Generator Set သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် Synchronous Generator ကိုမောင်းနှင်ရန် Primeel အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသောစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ထို့နောက် Cummins ဒီဇယ်မီးစက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါစို့။
ဒီဇယ်စက်များသည်အရန်ကူးခြင်းနှင့်အရေးပေါ်စွမ်းအင်စနစ်များအတွက်အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤမီးစက်သည်လျှပ်စစ်ဝန်များကို 10 စက္ကန့်အောက် သာ. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွင်ပါဝါပြတ်တောက်မှုနှုန်းဖြင့်စတင်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ Cummins ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံတွင်အစိုင်အခဲယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုဇုန်များတွင်ပါဝါထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ, အထွတ်အထိပ်ရိတ်ခြင်းနှင့်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤတွင် cummins ဒီဇယ်မီးစက်၏အင်္ဂါရပ်များမှာ -
4. Various အပိုပစ္စည်းများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်မှအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
Cummins Diesel Generator Set သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးခြင်း, အဆင်ပြေမှုနည်းပါးခြင်း, ။ Cummins Diesel Generator Set သည် Self-Supported Power Station တွင် AC Power Supply ပစ္စည်းကိရိယာများလည်းဖြစ်သည်။ Cummins Diesel Generator Set သည်အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ, သတ္တုတူးဖော်ရေးနယ်မြေများ, မွေးမြူရေးခြံများ, အာဏာနှင့်အလင်းရောင်အတွက်အဓိကလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်လွတ်လပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရန်လိုအပ်သည်။
ဈေးကွက်တွင်မီးစက်တပ်ဆင်ထားသောမီးစက်များအမြောက်အများရှိပြီးမတူညီသောမီးစက်အမျိုးမျိုးသည်အမျိုးမျိုးသောဖျော်ဖြေမှုများ, စျေးကွက်အခြေအနေများစသည်တို့ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့ပစ်ခတ်သော cummins generator အစုံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်ဝန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသောလောင်စာသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ Cummins Diesel Generator အစုံများကိုများသောအားဖြင့်အရေးပေါ်သို့မဟုတ် backup ပါဝါအရင်းအမြစ်များအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသောလောင်စာသည်ဒီဇယ်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမရှိသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောဒီဇယ်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ် Cummins Generator အစုံများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ လေတိုက်မောင်းနှင်သော cummins generator set ကိုအရန်ကူးခြင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်မှတ် ယူ. မရပါ။ သို့သော်၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင် cummins diesel generator ကို0ယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ0န်ဆောင်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်ပြီးအာရှ, ဆောက်လုပ်ရေး, ဆက်သွယ်ရေး, ဒေတာ, ဥရောပ, ဥရောပ, ဥရောပ, အရှေ့နှင့်အမေရိက။